'पाँच वर्षअघि बुढो कांग्रेस २३ सिटमा झरेको होइन ? 'अब १३ सिटमा झार्नुपर्छ' :- ओली • Nepal's Trusted Digital Newspaper'पाँच वर्षअघि बुढो कांग्रेस २३ सिटमा झरेको होइन ? 'अब १३ सिटमा झार्नुपर्छ' :- ओली • Nepal's Trusted Digital Newspaper
‘पाँच वर्षअघि बुढो कांग्रेस २३ सिटमा झरेको होइन ? ‘अब १३ सिटमा झार्नुपर्छ’ :- ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आगामी चुनावमा १३ सिटमा झारिदने बताउनुएकाे छ । एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पाँच वर्षअघि २३ मा झारिसकेकोले अब १३ सिटमा झारिदिनु पर्ने बताउनुभएकाे हाे ।
‘यो गठबन्धन केही होइन । पाँच वर्षअघि बुढो कांग्रेस २३ सिटमा झरेको होइन ?’ कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै उहाँले भन्नुभयाे, ‘अब १३ सिटमा झार्नुपर्छ । लाग्नुस् न !’
कांग्रेसलाई ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले मत नदिने उल्लेख गर्दै उहाँले युवाहरूले झन भोट हाल्नुपर्ने कारण नभएको जिकिर गर्नुभयाे ।
यस्तै गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै नबनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले यही चुनावमै समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुभयाे । गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रलाई यसअघि एमालेले बचाइदिएको दाबी गर्नुभयाे ।
साथै स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा अमध्यक्ष ओलीले गडबढ हुने भन्दै मतपेटिका आफूहरूको आँखै अगाडि राख्नुपर्ने माग गर्नुभयाे। लाह छाप लगाए पनि कोठाभित्र राखेका बाकसको भर नहुने भन्दै उहाँले त्यसको पहरेदारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयाे ।